Tìm thấy 11077 kết quả
Reklamer I Dag | Jensforum 21/07/2019
21/7/2019 | Fra min video "sådan får man visninger?" https://www.youtube.com/watch?v=5bEqlFwH7Ik Facebook: http://www.facebook.com/JensForum Instagram: @jensverden Gaming Kanal: https://www.youtube.com/user/JensIngame Kontakt & Business: JensForum@ho...
Dvb - H1n1နဲ့ သေဆုံးသူ ၆၄ ဦးထိ ရှိလာ | Dvb Tvnews 21/07/2019
DVB TVnews | 21/7/2019 | H1N1 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီး သေဆုံးသူတွေဟာ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့အထိ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ၆၄ ဦး ရှိလာပြီလို့ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက သတင်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ #DVBTV #briefing DVB TV - 21.07.2019
Dvb - ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ မုန်တိုင်းငယ်တခု ဖြစ်လာနိုင် | Dvb Tvnews 21/07/2019
DVB TVnews | 21/7/2019 | ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာ လေထုမငြိမ်မသက်တာကြောင့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတခုဖြစ်ပေါ်နေပြီး ပိုမိုအားကောင်းလာကာ မုန်တိုင်းငယ်တခု ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ မိုးလေ၀သ ပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းက ဇူလိုင် ၂၁ ရက် မနက်အစောပိုင်း လူမှုကွန်ရက်စာမ...
Dvb - မြင်းခြံမြို့မှာ လူငယ်​တစ်​ဦး ဆိုင်​ကယ်စတန့် သရုပ်​ပြ | Dvb Tvnews 21/07/2019
DVB TVnews | 21/7/2019 | မန္တ​လေးတိုင်း​ဒေသကြီး၊ မြင်းခြံမြို့နယ်​ ကူရွာ​ကျေးရွာမှ လူငယ်​တစ်​ဦး ဖြစ်​တဲ့ ကို​ဝေယံကိုဟာ ဇူလှိုင်​လ ၂၀ ရက်​​နေ့ ည​နေ​ပိုင်းက မြင်းခြံ- ​တောင်​သာ ကားလမ်းမ​ပေါ်မှာ ဆိုင်​ကယ်​ စီးနိုင်ပြီး စတန့်​မျိုးစုံ သရုပ်​ပြသခဲ့ပါတယ်​။...
Dvb - Mandalay Advertising Group ဝန်ဆောင်မှုရုံး မန္တ​လေးမှာ ဖွင့်လှစ် | Dvb Tvnews 21/07/2019
DVB TVnews | 21/7/2019 | ဒေသတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုပေးမယ့် Mandalay Advertising Group ဝန်ဆောင်မှုရုံးကို ဇူလိုင်လ ၂၀ရက်နေ့က မန္တ​လေးမြို့မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ #DVBTV #briefing DVB TV - 21.07.2019
Dvb - Linkin Park အဆိုတော် ချက်စတာသေဆုံးခြင်း ၂နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ကျင်းပ | Dvb Tvnews 21/07/2019
DVB TVnews | 21/7/2019 | ကမ္ဘာကျော် Linkin Park ဂီတအဖွဲ့ ရဲ့အဆိုတော်ချက်စတာသေဆုံးခြင်း ၂နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ကို လူငယ်တွေစုစည်းပြီး ဇူလိူင် ၂၀ ရက်နေ့ညနေက ရန်ကုန်မြို့ Boozeup Bar မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ #DVBTV #LinkinPark #chester DVB TV - 21.07.2019
Dvb - ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်ကို 3d ပုံရိပ်ဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်ပြီ | Dvb Tvnews 21/07/2019
DVB TVnews | 21/7/2019 | ရန်ကုန်မြို့က ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်ထဲကို ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလို သုံးဖက်မြင် (3D) ပုံရိပ်အဖြစ် ကြည့်ရှုနိုင်ပြီဆိုတာကို ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့က လူမှုကွန်ရက်ကတဆင့် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ #DVBTV #briefing DVB TV - 21.07.2019
Dvb- ဖောင်းပြင်မြို့မှာ မြို့လူထုထက်ဝက်ကျော် တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွား | Dvb Tvnews 21/07/2019
DVB TVnews | 21/7/2019 | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မော်လိုက်ခရိုင်၊ ဖောင်းပြင်မြို့တွင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်ကတည်းက စတင်ကာ တုပ်ကွေးရောဂါသိသိသာသာဖြစ်ပွားနေပြီး လက်ရှိမှာ မြို့လူဦးရေရဲ့ ထက်ဝက်ကျော်ကို တုပ်ကွေးရောဂါဝေဒနာခံစားနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ #DVBTV #br...
Dvb - ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်နိုင်ဖို့ တူညီတဲ့ ဆုံးဖြတ်မှုတွေရရှိမှ ထိရောက်လိမ့်မည် | Dvb Tvnews 21/07/2019
DVB TVnews | 21/7/2019 | ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်နိုင်ဖို့ အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အသီးသီးကခေါင်းဆောင်တွေကြား တူညီတဲ့ ဆုံးဖြတ်တွေရရှိမှ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးလမ်းကြောင်းက ထိရောက်လိမ့်မယ်လို့ နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းက သုံးသပ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုေ...
Dvb - ငွေကြေးလိုအပ်ချက်ကြောင့် နိုင်ငံတကာကင်းထောက်အဖွဲ့အစည်းကို မယှဉ်နိုင်သေး | Dvb Tvnews 21/07/2019
DVB TVnews | 21/7/2019 | ငွေကြေး လိုအပ်ချက်တွေကြောင့် နိုင်ငံတကာ ကင်းထောက် အဖွဲ့အစည်းတွေကို မယှဉ်နိုင်သေးဘူးလို့ မြန်မာနိုင်ငံကင်းထောက်အဖွဲ့ဝင် လူငယ်တွေကပြောပါတယ်။ သူဇာလင်း သတင်းပေးပို့ထားပါတယ် DVB TV -
Dvb - ကလေးငယ်တွေကို လိင်အသိပညာပေး သင်ကြားပေးသင့် | Dvb Tvnews 21/07/2019
DVB TVnews | 21/7/2019 | ကလေးငယ်တွေကို သူတို့ရဲ့ အသက်အရွယ်အလိုက် လိင်အသိပညာပေးတာကို မိဘတွေက သင့်လျော်တဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ သင်ကြားပေးသင့်တယ်လို့ ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းကို စုစုပေးပို့ထားပါတယ် #DVBTV #PTT
Dvb - မြိုင်မြို့နယ်က ကျေးရွာတချို့ လွန်ဆွဲပွဲ ကျင်းပ | Dvb Tvnews 21/07/2019
DVB TVnews | 21/7/2019 | မြိုင်မြို့နယ်က ကျေးရွာတချို့မှာ လွန်ဆွဲပွဲတွေ ကျင်းပနေပါတယ်။ ဦးမြင့်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ် DVB TV -
ဒီဗွီဘီ ရုပ်​သံ တစ်​​နေ့တာ သတင်းတိုများ (dvb Tv 20.07.2019 News Briefing) | Dvb Tvnews 21/07/2019
DVB TVnews | 21/7/2019 | DVB TV -
Dvb - နိုင်ငံတ၀န်း ဇူလိုင်လအတွင်း ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် လူ ၅ သောင်းခန့် ရေဘေးသင့် | Dvb Tvnews 21/07/2019
Dvb - လူကုန်ကူးဖို့ ကြိုးစားတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ ၈ မှုအထိ ရှိ | Dvb Tvnews 21/07/2019
DVB TVnews | 21/7/2019 | မြန်မာနိုင်ငံထဲကို ဝင်ရောက်ပြီး လူကုန်ကူးဖို့ ကြိုးစားတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကို အမှုဖွင့်အရေးယူထားတာ ၈ မှုအထိ ရှိသွားပြီလို့ လူကုန်တားရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ခိုင်ပန်းနု ပေးပို့ထားပါတယ် DVB TV -
Dvb - ရာထူးတိုးအတွက် နိုင်ငံတော်အဆင့်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တွကို တင်ပြသွားမယ် | Dvb Tvnews 21/07/2019
DVB TVnews | 21/7/2019 | လုပ်သက်(၃) နှစ်ကျော်ကွာခြားတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို ရာထူးတိုးခန့်အပ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ခန့်အပ်ခံထားရတဲ့ဆရာ ၊ ဆရာမတွေက နိုင်ငံတော်အဆင့်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တွကို တင်ပြသွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းကို နေလင်းအောင်က ပေးပို့ထားပါတယ...
Dvb - မြောက်ဦးမြို့တွင် ဟိုတယ်အချို့ကို ပိတ်ထားရ | Dvb Tvnews 21/07/2019
DVB TVnews | 21/7/2019 | ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် မြောက်ဦးမှာ ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုနည်းပါးသွားလို့ ဟိုတယ်အချို့ကို ပိတ်ထားရ တယ်လို့ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေက ပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ဝဏ္ဏခွာညို ပေးပို့ထားပါတယ် DVB TV -
Dvb - လူဦးရေစာရင်းကောက်ယူရာမှာ ပြည်သူတွေ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ တိုက်တွန်း | Dvb Tvnews 21/07/2019
DVB TVnews | 21/7/2019 | လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်း လူဦးရေစာရင်းကောက်ယူရာမှာ ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲတာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ဇေယျာချမ်းအေးပေးပို့ ထားပါတယ် DVB TV -
Dvb - မကွေးတိုင်းအတွင်း စပါးပင်တွေ ပျက်စီးတော့မယ့် အခြေအနေကို ရောက်နေ | Dvb Tvnews 21/07/2019
DVB TVnews | 21/7/2019 | မကွေးတိုင်း၊ ကံမမြိုနယ်ထဲက ကျေးရွာတစ်ရွာက လယ်တွေဧက ၁၀၀ ကျော်လောက်ရေ မရတော့တာကြောင့် စပါးပင်တွေ ပျက်စီးတော့မယ့် အခြေအနေကို ရောက်နေပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားတာပါ DVB TV -
Dvb - လျှပ်စစ်မီတာခ တိုးမြှင့်ကောက်ခံခြင်းအပေါ် အမြင်များ | Dvb Tvnews 21/07/2019
DVB TVnews | 21/7/2019 | DVB TV - 21.07.2019
Garfield American Express Featuring Jim Davis (1985) | Jon Meyer 21/07/2019
Jon Meyer | 21/7/2019 | Garfield and his creator Jim Davis have an American Express credit card.
Cartoon Theatre Promo The Bugs Bunny Road Runner Movie 02 (2000) | Jon Meyer 21/07/2019
Jon Meyer | 21/7/2019 | The second promo for The Bugs Bunny Road Runner Movie from Cartoon Networks Cartoon Theater.
Cartoon Theatre Promo The Bugs Bunny Road Runner Movie 1 (2000) | Jon Meyer 21/07/2019
Jon Meyer | 21/7/2019 | The first promo for The Bugs Bunny Road Runner Movie from Cartoon Networks Cartoon Theater.
E-trike | Failon Ngayon | Abs-cbn News 21/07/2019
21/7/2019 | “Failon Ngayon” features the use of e-trikes, and how it can create positive environmental and health impact in the long run. The program also learns how the government promotes the use of the said technology in the country. Abangan ang mg...
Dvb - တပ်​မ​တော်​​ရေတပ်​သ​င်္ဘောတစ်​စီး ​တိုက်​ခိုက်​ခံရ | Dvb Tvnews 20/07/2019
DVB TVnews | 20/7/2019 | ​ရ​ခိုင်​ပြည်​နယ်​ရသေ့​တောင်​မြို့နယ်​ ပြာပင်​ရင်း ​ချောင်းဝ တွင်​ ​ရပ်​နားထားတဲ့ တပ်​မတော်​ ​ရေတပ်​ ပိုင်​သ​ဘောင်္း တစ်​စီး ဇူလိုင်​လ ၂၀ ရက်​​နေ့ မနက်​ ၅ နာရီလောက်က တိုက်​ခိုက်​ခံရ​တယ်လို့ ဗိုလ်​ချုပ်​၀င်းဇော်​ဦးက အတည်​ပြု​...
Dvb - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကင်းထောက်အဖွဲ့ချုပ်အကြီးအကဲအဖြစ် ကတိခံယူ | Dvb Tvnews 20/07/2019
DVB TVnews | 20/7/2019 | နိုင်ငံတော်ရဲ့ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာနိုင်ငံ ကင်းထောက်အဖွဲ့ချုပ် အကြီးအကဲအဖြစ် ကတိခံယူပွဲကို ဇူလိုင် ၂၀ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိန်ရတုခန်းမမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ #DVBTV #briefing DVB TV - 20.07.2019
Dvb - မြို့ ၅ မြို့ မြစ်ရေ စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက် ရောက်ရှိ | Dvb Tvnews 20/07/2019
DVB TVnews | 20/7/2019 | မြို့ ၅ မြို့ရဲ့ မြစ်ရေဟာ စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက်ကို ရောက်ရှိနေတယ်လို့ မိုးဇလက ဒီနေ့မနက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဧရာဝတြီ မစ်ရေ ဟာ ကသာမြို့ရဲ့ စိုးရိမ်ရေမှတ် ၁၀၄၀ ကနေ ၁၀၅၁ စင်တီမီတာ၊ သပိတ်ကျင်းမြို့ရဲ့ စိုးရိမ်ရေမှတ် ၁၄၈၀ ကနေ ၁၅၄၀ စင်တ...
Dvb - တရားမ၀င် E Book လင့်ခ်တွေ ဖြုတ်ချဖို့ သတိပေး | Dvb Tvnews 20/07/2019
DVB TVnews | 20/7/2019 | အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တရားမ၀င်တင်ထားတဲ့eBook လင့်ခ် စာမျက်နှာ ၁၈၀ ကျော်ကို ဖြုတ်ချပေးဖို့နဲ့ မဖြုတ်ချရင် အရေးယူသွားမယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ စာပေထုတ်ဝေသူနှင့် ဖြန့်ချိသူများအသင်းက သတိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်။ #DVBTV #briefing DVB TV - 20.0...
Dvb - နေ့စဉ် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် (၂၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ ညနေပိုင်း) | Dvb Tvnews 20/07/2019
DVB TVnews | 20/7/2019 | တင်ဆက် ယွန်းရတီ DVB TV - 20 07 2019
Dvb - Today Online (အွန်လိုင်းပေါ်က သတင်းများ) | Dvb Tvnews 20/07/2019
DVB TVnews | 20/7/2019 | #တူ​ဒေးအွန်​လိုင်း -မြန်မာ့အငယ်ဆုံး ဒရမ်သမား -ဖုန်းအရမ်းဆော့တဲ့ သမီးကို ဆုံးမနည်း -ကင်ဆာရောဂါခံစားနေရတဲ့ ကိုရီးယားက beauty blogger -ပလပ်စတစ်နဲ့ဆောက်တဲ့ မြန်မာ့ကျောင်း #DVBTV #Daily #TodayOnline အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေမှာ လြူေ...
Dvb - ကမ္ဘာ့ အသည်းရောင်ရောဂါနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကာကွယ်ဆေးတွေ အခမဲ့ ထိုးပေးမယ် | Dvb Tvnews 20/07/2019
DVB TVnews | 20/7/2019 | ကမ္ဘာ့ အသည်းရောင်ရောဂါနေ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ လူ (၁၀၀၀)ကျော်ကို ဘီပိုး၊စီးပိုး စစ်ဆေးတာနဲ့ ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး ထိုး တာတွေ ကို အခမဲ့လုပ်ဆောင်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဆုဆုသွယ်ကပေးပို့ထားပါတယ်။ DVB TV -
Dvb - ပန်းချီဆရာမစံသက်ထားဦးရဲ့ The Beauty Of Venu တကိုယ်တော် ပန်းချီပြပွဲ ကျင်းပ | Dvb Tvnews 20/07/2019
DVB TVnews | 20/7/2019 | ပန်းချီဆရာမစံသက်ထားဦးရဲ့ The Beauty of Venus အမည်ရှိ ပထမအကြိမ်တကိုယ်တော်ပန်းချီပြပွဲကို ရန်ကုန်၊ ဗိုလ်တထော င်မြို့နယ် ၄၃ လမ်း ပြခန်းမှာ ပြုလုပ်နေပါတယ်။ DVB TV -
Dvb - သက်ငယ်မုဒိန်းပညာပေးကဏ္ဍတွေကို ကျောင်းသင်ခန်းစာ မှာထည့်သွင်းသင့် | Dvb Tvnews 20/07/2019
DVB TVnews | 20/7/2019 | သက်ငယ်မုဒိန်းမှုအတွက် တရားမျှတမှုကိုတောင်းဆိုတာထက် မဖြစ်ခင်ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ပညာပေးကဏ္ဍတွေကို ကျောင်းပညာရေး မှာထည့်သွင်းသင်ကြားသင့်တယ်လို့ နယ်ပယ်အသီးသီးကပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုစုစုပေးပို့ထားပါတယ်။ DVB TV -
Dvb - နေ့စဉ် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် (၂၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ မနက်ပိုင်း) | Dvb Tvnews 20/07/2019
Dvb - ပခုက္ကူမှာ မိုးခေါင်မှုကြောင့် တိရစ္ဆာန်အစာ ရှားပါးနေတယ် | Dvb Tvnews 20/07/2019
DVB TVnews | 20/7/2019 | ပခုက္ကူဒေသမှာ မိုးခေါင်မှုကြောင့် တိရစ္ဆာန်အစာရှားပါးမှုတွေပါဖြစ်နေပါတယ်။ ဦးမြင့်နိုင်က သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ DVB TV -
Dvb - စိုက်​ပျိုးစာရိတ် ချေး​ငွေပိုပေးဖို့ လယ်​သမားတွေ တောင်းဆို | Dvb Tvnews 20/07/2019
DVB TVnews | 20/7/2019 | မောင်​​တော​မြို့နယ်မှာ လယ်လုပ်​သားရှားပါ​​ပြီး လုပ်​သားခ​ဈေးမြင့်​မား​တာကြောင့် စိုက်​ပျိုးစာရိတ်ချေး​ငွေ ပို​မို​ချေး​ပေးဖို့လယ်​သမားတွေ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို စိုးမိုးအောင်က ပေးပို့ထားပါတယ် DVB TV -
Dvb - မန္တလေးမြို့မှာ ဝါးအသုံးချနည်းပညာနဲ့ အော်ဂဲနစ်သင်တန်း ဖွင့်လှစ် | Dvb Tvnews 20/07/2019
DVB TVnews | 20/7/2019 | မန္တလေးမြို့မှာ ဝါးအသုံးချနည်းပညာနဲ့ အော်ဂဲနစ်သင်တန်းတစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေပါတယ်။ ဦးကျော်ဇေ သတင်းပေးပို့ ထားပါတယ်။ DVB TV -
Dvb - အွန်လိုင်းကနေ မီတာခ ဆောင်တဲ့ စနစ်ကို လူသိနည်းနေသေးတယ် | Dvb Tvnews 20/07/2019
DVB TVnews | 20/7/2019 | လျှပ်စစ်မီတာခကို အွန်လိုင်းကနေပေးသွင်းနိုင်ပြီဖြစ်ပေမယ့် လူသိနည်းနေသေးတယ်လို့ မန္တ​လေးတိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း ကပြောပါတယ်။ ချမ်းမြေ့မောင်ပေးပို့ထားပါတယ်။ DVB TV -
Dvb - Miss Myanmar International 2019 Grand Final ပြိုင်ပွဲကို သြဂုတ်လမှာကျင်းပသွားမယ် | Dvb Tvnews 20/07/2019
DVB TVnews | 20/7/2019 | ၈ကြိမ်မြောက် Miss Myanmar International 2019 Grand Finalပြိုင်ပွဲကို သြဂုတ်လအတွင်းပြုလုပ်ဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒီသတင်း ကိုမေစုပေးပို့ထားတာပါ။ DVB TV -
Dvb - ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ကို စက်တင်ဘာ အကုန်မှာ စတင်ရိုက်ကူးမယ် | Dvb Tvnews 20/07/2019
DVB TVnews | 20/7/2019 | ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလအကုန်မှာစတင်ရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပြီးခန့်မှန်းခြေ၅လအတွင်းအပြီးရိုက်ကူးသွားမယ်လို့ဒါရိုက်တာလူမင်းကပြောပါတယ်။ရန်နိုင်ဇော်ဝင်းပေးပို့ထားတာပါ။ DVB TV -
Dvb - သတင်းစာပေါ်က ဖတ်စရာများ | Dvb Tvnews 20/07/2019
DVB TVnews | 20/7/2019 | တင်ဆက် အောင်သူ နေလင်းအောင် DVB TV - 20 07 2019
Dvb - ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးအပေါ် ရေးမြို့နယ်အမြင်များ | Dvb Tvnews 20/07/2019
DVB TVnews | 20/7/2019 | DVB TV - 20 07 2019
"၁၉ ဇူလိုင် ၁၀း၃၇ နာရီနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်" | Dvb Tvnews 19/07/2019
DVB TVnews | 19/7/2019 | #SuuKyi #DASSK #အာဇာနည် #ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် 19.07.2019 Video.credit . .Hnin maung
Dvb - စစ်ကိုင်းမှာ ဧရာဝတီမြစ်ရေ မြင့်တက်လာလို့ လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေ ဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ | Dvb Tvnews 19/07/2019
DVB TVnews | 19/7/2019 | စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်မှာ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက ဧရာဝတီမြစ်ရေ မြင့်တက်လာတဲ့အတွက် အနိမ့်ပိုင်းဒေသတွေက နှစ်စဉ်ရေဝင်ရောက်လေ့ရှိတဲ့ ရပ်ကွက်နဲ့ ကျေးရွာတချို့က လူနဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေ ရေလွတ်ရာကို ပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်။ ...
Dvb - အာဇာနည် ၉ ဦးကိုဂုဏ်ပြု ဂရပ်ဖစ်တီပညာရှင် ပန်းချီရေးဆွဲ | Dvb Tvnews 19/07/2019
DVB TVnews | 19/7/2019 | အာဇာနည်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ မန္တလေးမြို့က ဂရပ်ဖစ်တီလူငယ်ပညာရှင် MC Prince က အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ၉ ဦးရဲ့ရုပ်ပုံကို ပန်းချီရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။အခုလို ပန်းချီရေးဆွဲတာက အာဇာနည်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ရော ကျဆုံးသွားတဲ့ အာဇာနည်ခေါင်...
Dvb - မော်လမြိုင်မှာ အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားကို လူထောင်ချီ တက်ရောက် | Dvb Tvnews 19/07/2019
DVB TVnews | 19/7/2019 | မော်လမြိုင်မှာ ကျင်းပတဲ့ ၇၂ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားကိုလူအင်အား ထောင်ချီ တက်ရောက် အလေးပြုခဲ့ပါတယ်။ #DVBTV #briefing DVB TV - 19.07.2019
Dvb - နေ့စဉ် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် (၁၉ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ ညနေပိုင်း) | Dvb Tvnews 19/07/2019
DVB TVnews | 19/7/2019 | တင်ဆက် လွင်မိုးအောင် DVB TV - 19 07 2019
Dvb - Today Online (အွန်လိုင်းပေါ်က သတင်းများ) | Dvb Tvnews 19/07/2019
DVB TVnews | 19/7/2019 | #တူဒေးအွန်လိုင်း -စစ်ကိုင်း ဆွမ်းဦးပုံညရှင်တောင်တက်လမ်းကဖြစ်ရပ်မှန် -လူပြောများနေတဲ့ မြန်မာ့ဟင်းချက်ပြိုင်ပွဲကဒိုင်တွေ -ရွှေတိဂုံအရှေ့မုဒ်က မြောက်ရှုံးတဲ့ကလေး -ထူးခြားတဲ့ ဒစ်စကိုဘုန်းကြီးပင့်နည်း -မြန်မာ့စောင်းနဲ့တီးပြတဲ့Ed Sh...
Dvb - မျိုးဆက်သစ်တွေကို အာဇာနည်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် သိစေချင်တယ် | Dvb Tvnews 19/07/2019
DVB TVnews | 19/7/2019 | မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ အာဇာနည်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သိစေချင်ပြီး လူကြီးတွေ မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို လူငယ်တွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိ ရှိစေချင်တယ်လို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် က ပြောပါတယ...
Dvb - ဘားအံ အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနား လူဦးရေ ၁ သောင်းနီပါး ပန်းခွေချအလေးပြု | Dvb Tvnews 19/07/2019
DVB TVnews | 19/7/2019 | ၇၂ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို ဘားအံမြို့ အမှတ် ၃ ရပ်ကွက်၊ အာဇာနည်ကျောက်တိုင်ကွင်းမှာပြုလုပ်ရာ လူဦးရေ ၁ သောင်းနီးပါး တက်ရောက်ပြီး လွမ်းသူ့ပန်းခွေချ အလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ #DVBTV #briefing DVB TV - 19.07.2019